१. सदस्यको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि विना धितो, बचत जमानी, सदस्य धनजमानीको आधारमा लगानी गरिएको ऋणलाई व्यवसायी ऋण भनिनेछ ।
२. यस शिर्षकमा बढिमा दश लाख सम्म मात्र ऋण लगानी गरिनेछ ।
३. यो ऋणको किस्ता दुई लाख सम्मको एक वर्ष, छ लाख सम्मको दुई वर्ष र दश लाख वा सो भन्दा बढी बढीमा तीन वर्षको हुनेछ ।
४. किस्ता भुक्तानी तरिका मासिक वा त्रैमासिक वा सदस्यको वित्तिय अवस्था बमोजिम हुनेछ ।
१.सदस्य स्वयम् वा सदस्यका आश्रित सन्ततीहरुले उच्चशिक्षा हासिल गर्ने कार्यमा वित्तीय समस्याका कारण उच्चशिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन संस्थाले उनिहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अध्ययन गर्न चाहेको विश्वविद्यालय वा क्याम्पसको भर्ना स्वीकृतिको पत्रका आधारमा प्रदान गरिने ऋणलाई शैक्षिक ऋण भनिनेछ ।
२.बाल बचत, मासिक बचत, विशेष बचत, श्रम बचत तथा संस्थाले सञ्चालन गरेका बचत सेवामा संलग्न सदस्य र निजका सन्ततीको उच्च शिक्षा प्राप्तीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिनेछ ।
३.प्रविणता पमाण पत्र तह (१०+२) उत्तीर्ण नगरेका र दुई शैक्षिक सत्र भन्दा लामो अवधि अध्ययन अवरुद्ध भएका शिक्षार्थीको हकमा यस्तो ऋण प्रदान गरिनेछैन ।
४.यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा संरक्षक वा अध्ययन गर्ने व्यक्ति स्वयम्को नियमित आम्दानीको श्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ ।
५.यो ऋण शिर्षकमा हाललाई बढीमा रु.पन्ध्र लाख सम्म मात्र लागनि गरिनेछ ।
६.यो ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सदस्यले ऐच्छिक बचतमा बचत गर्दै जानुपर्नेछ ।
७.यो ऋणको किस्ता अवधी बढिमा पाँच वर्ष सम्मको हुनेछ ।
८.यस्तो ऋणको सावा त्रैमासिक, व्याज मासिक गर्न सकिनेछ । सदस्यको आवश्यकताको आधारमा मासिक किस्ता बनाउन सक्नेछ ।
९.शैक्षिक ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सदस्यले ऐच्छिक बचतमा बचत गर्दै जानुपर्नेछ ।
१.यस्तो ऋण व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक भाडामा सञ्चालन गर्ने सवारी साधन खरिद प्रयोजनको लागि प्रदान गरिने ऋणलाई हायर पर्चेज ऋण भनिन्छ ।
२.सवारी साधनको कुल लागतको बढिमा ६५ प्रतिशत सम्म मात्र हायर पर्चेज ऋण लगानी गरिने छ ।
३.दुइ पाग्रे सवारीको हकमा हाललाई बढीमा रु.तीन लाख सम्म मात्र लागनि गरिनेछ ।
४.यस ऋणमा सुरक्षणको रुपमा अन्य स्थीर सम्पत्ती (घर, जग्गा) बाहेक सोही साधन समेत संस्थाको नाममा स्वामित्व रहने गरि राखिनेछ ।
५.सवारी साधनको तेश्रोपक्ष बीमा, दुर्घटना बीमा, करचुक्ता र सार्वजनिक साधनको हकमा रुट सञ्चालन स्वीकृति समेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ ।
६.हालका लागि दुई पांग्रे साधनको हकमा बढिमा दुई वर्ष अवधिको लागि लगानी गरिने ।
७.यस्तो साधनको बीमा लगायतका अन्य नियमित कानुनी दायित्व भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम ऋणीको ऐच्छिक बचत खातामा जम्मा गर्न लगाइनेछ ।
८.अन्य शिर्षकमा ऋण लिई ऋणको भाखा नघाएको सदस्य, नियमित बचत नगरेको सदस्यलाई यो ऋण सुविधा प्रदान गरिने छैन ।
९.यस्तो ऋणको किस्ता भुक्तानी तारिका मासिक हुनेछ । यस्तो ऋणको किस्ताका भुक्तानीका लागि सदस्यले ऐच्छिक बचतमा बचत गर्दै जानुपर्नेछ ।
१.सदस्य वा निजको एकाघरको कुनै व्यक्ति बिरामी भई औषधी उपचार गर्नु पर्ने भएमा वा निज वा निजको संरक्षणमा रहेका कसैको मृत्यु भई काजकिरिया गर्नुपर्ने भएमा वा दैवी विपत्ति परेमा प्रदान गरिने ऋणलाई आपत्कालीन ऋण भनिनेछ ।
२.आपत्कालीन बचत खाता खोलेको सदस्यलाई यो ऋण सुविधामा पहिलो प्राथमिकता दिइने छ ।
३.आपत्कालीन ऋण एकजना सदस्यलाई वर्षमा एकपटक सम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ ।
४.यो ऋणको अवधि छ महिनाको हुनेछ ।
५.यस्तो ऋणको किस्ता एकमुष्ट भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
Purna Byabasik Rin
१.सदस्यको आफ्नो व्यापार व्यवसाय थप विस्तार गर्नका लागि घर, जग्गा संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक लिई गरिने लगानीलाइ पूर्ण व्यवसायीक ऋण भनिनेछ ।
२.यस शिर्षकमा बढिमा प्रथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत सम्म मात्र ऋण लगानी गरिनेछ ।
३.यो ऋणको किस्ता अवधी पन्ध्र लाख सम्मको पाँच वर्ष र पन्ध्र लाख भन्दा बढी ऋणको लागि वढीमा ७ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
४.पूर्ण व्यवसायीक ऋणको किस्ता भुक्तानी तरिका मासिक वा सदस्यको वित्तिय अवस्था बमोजिम हुनेछ ।
५.पूर्ण व्यवसायीक ऋणका किस्ता भुक्तानीका लागि सदस्यले ऐच्छिक बचतमा बचत जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ ।
Insurance Premum Loan
१.सदस्यहरुको वित्तीय तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्न जीवन बीमालाई प्रोत्साहित साथै सहज र सरल बनाउन न्यून आय भएका सदस्यहरुलाई समेत व्यावसायीक बीमा योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले बचत जमानत, सदस्य धनजमानीको आधारमा बीमा प्रिमियम भुक्तानी प्रयोजनको लागि लगानी गरिने ऋणलाई बीमा प्रिमियम ऋण भनिनेछ ।
२.यस शिर्षकमा बीमा प्रिमियमको किस्ता बराबर मात्र ऋण लगानी गरिनेछ ।
३.यस शिर्षकमा बढीमा रु.तीन लाख नबढ्ने गरि ऋण लगानी गरिनेछ ।
४.यो ऋणको किस्ता अवधी बढीमा एक वर्ष सम्मको हुनेछ ।
५.यो ऋणको किस्ता भुक्तानी तारिका मासिक हुनेछ ।
१.नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृतिको आधारमा रोजगारीको लागि विदेश जाने सदस्य, सदस्यका आश्रित वा अभिभावकलाई सो वैदेशिक रोजगारीमा जा“दा लाग्ने राहदानी (पासपोर्ट), प्रवेशाज्ञा (भीषा), स्वास्थ्य परिक्षण (मेडिकल) जस्ता कानुनी प्रक्रिया पुरा भई कागजात प्राप्त भएको आधारमा अधिकतम हवाई टिकट र कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने अन्य शुल्क वापतको रकम बराबर प्रवाह गरिने ऋणलाई बैदेशिक रोगजार ऋण भनिनेछ ।
२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य रुपमा जीवन बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
३.यस्तो ऋणको किस्ता त्रैमासिक हुनेछ ।
४.यस्तो ऋण बढिमा १८ महिना अवधिको लागि मात्र लगानी गरिनेछ ।
१.व्यक्तिगत आवास तथा उत्पादन प्रयोजनको लागि जग्गा तथा घडेरी खरिद गर्न प्रदान गरिने ऋणलाई घर, जग्गा ऋण भनिन्छ ।
२.व्यापारिक प्रयोजनको लागि घर तथा जग्गा खरिद गर्न भने यसक शिर्षकमा ऋण लगानी गरिने छैन ।
३.घर, जग्गा उद्देश्यमा ऋण प्रवाह गर्दा कुल लागतको बढीमा ७५ प्रतिशत सम्म गर्न सकिनेछ ।
४.आवासीय घर निर्माण तथा मर्मत गर्ने कार्यको लागि घर जग्गा ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ । यसरी निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सो उद्देश्यमा लगानी गर्नुपर्ने लागतको ६० प्रतिशत भन्दा बढि भार ऋणमा नपर्ने गरी मात्र लगानी गरिनेछ ।
५.निर्माण सम्पन्न भई उपयोगी अवस्थामा रहेको घर तथा गोदाम खरिदको लागि घर जग्गा ऋण प्रवाह गर्न सकिने छ । यसरी घर खरिदको लागि ऋण प्रवाह गर्दा त्यस्तो घरको अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाट नक्सा पास भएको हुनुपर्नेछ । साथै दर्तावाला प्राविधिक वा मूल्यांकनकर्ताबाट खुद मूल्य निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ ।
६.ऋणीको नाममा नभई दोश्रो वा तेश्रो पक्षमा स्वामित्व प्राप्त हुने भएमा घर, जग्गा ऋण प्रदान गरिनेछैन ।
७.यस्तो ऋणको किस्ताका भुक्तानीका लागि सदस्यले ऐच्छिक बचतमा बचत गर्दै जानुपर्नेछ ।
८.यस्तो ऋणको किस्ता त्रैमासिक वा सदस्यको वित्तिय अवस्था बमोजिम हुनेछ ।
९.यो ऋणको किस्ता अवधी पन्ध्र लाख सम्मको पाँच वर्ष र पन्ध्र लाख भन्दा बढी ऋणको लागि वढीमा १५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।